Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Caafimaadka Dabeecadda
Kheyraadka lagu taageerayo caafimaadkaaga oo dhan.
Dad badan waxay la kulmaan xaalad la xiriirta caafimaadka maskaxda ama isticmaalka maandooriyaha waqti uun noloshooda. Ma qeexayo cidda aad tahay mana jirto sabab loo dareemo dambi ama ceeb. La shaqeynta xirfadle waxay kaa caawin kartaa inaad maareyso xaaladaada. Haddii aad u baahan tahay daryeel degdeg ah, si aad ula hadasho la-taliye ama wax u dhexeeya, waxaan daboolnaa adeegyada kaa caawinaya inaad dareento sida ugu fiican.
Caafimaadka Maskaxda iyo Caafimaadka Habdhaqanka
Waa maxay farqiga u dhexeeya caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka habdhaqanka? Dadku had iyo jeer waxay u maleynayaan in ereyada ay isweydaarsan karaan, laakiin farqi hoose ayaa u dhexeeya labadooda. Caafimaadka Maskaxdu waa xaaladdaada guud ee ladnaanta iyo awoodda aad ula qabsan karto walaaca. Xaaladaha saameeya caafimaadkaaga maskaxda waa natiijada kiimikada maskaxda ama hidaha. Caafimaadka habdhaqanka waa habka caadooyinka ama dabeecadaha qaarkood ay u saameeyaan caafimaadkaaga. Caafimaadka akhlaaqda waxaa ka mid noqon doona waxyaabaha ay ka mid yihiin sigaar cabista, ku xadgudubka mukhaadaraadka, khamaarka, qabatinka, iyo cunno xumida.
Caafimaadka maskaxda iyo caafimaadka habdhaqanka labaduba waa qodobo waa weyn oo gacan ka geysta farxadaada, ladnaantaada, iyo caafimaadkaaga. Bixiyaha caafimaadkaagu waa xulaf. Si furan ugala hadal arrimo kasta oo ku soo food saara.
Qalabka Isticmaalka Maandooriyaha
Dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waxaa ka mid ah si xun u isticmaalka aalkolada, tubaakada, iyo daroogooyinka kale ee balwada leh. Waxay saameyn ku yeelan kartaa tayada noloshaada waxayna u horseedi kartaa arrimo caafimaad hoosta khadka. La hadalka bixiyahaaga waxay noqon kartaa cabsi gelin ama raaxo la'aan, laakiin waa tallaabada ugu horreysa ee lagu helo caawimaad. Qaababka loo daweeyo isticmaalka maandooriyaha way ku kala duwan yihiin qofba qofka kale. Waxaa jira ilo badan oo la heli karo si ay u taageeraan soo kabashadaada iyo bixiyahaaga ayaa kaa caawin kara helitaanka xalka adiga kuu shaqeyn doona.
Helitaanka Helitaanka Daryeelka
CHPW Medicare Advantage waxay leedahay shabakad badan oo adeeg bixiyeyaal ah oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda ama xaaladaha isticmaalka maandooriyaha. Uma baahnid gudbin si aad u aragto Bixiyaha Caafimaadka Maskaxda.
Markaad aragto Bixiyaha Caafimaadka Maskaxda, waxay ku weydiin doonaan xoogaa su'aalo ah si loo go'aamiyo nooca daryeelka aad u baahan tahay. Way kula shaqeyn doonaan si ay ballan kuugu helaan dhakhtarka saxda ah. Dhakhtarkaasi wuxuu noqon karaa iyaga ama bixiye kale ee Caafimaadka Maskaxda ee CHPW.
Waxaad xaq u leedahay inaad doorato bixiye aqoon u leh caafimaadkaaga maskaxda ama daryeelka isticmaalka maandooriyaha. Haddii aad dhibaato ku qabtid inaad gasho si aad u aragto bixiye, fadlan la xiriir Adeegga Macaamiisha.
Raadi Bixiyaha Saxda ah
Adeegso khadka tooska ah Raadi dhakhtar qalab.
Gali nambarkaaga boostada.
Gali ereyga raadinta ee sida ugu fiican u qeexaya waxaad u maleyneyso inaad u baahan tahay baarka ku yaal "Filter by Specialties":
Ku tiirsanaanta kiimikada (xaaladda isticmaalka maandooriyaha / qabatinka)
Caafimaadka Maskaxda Caafimaadka Maskaxda (Waad qori kartaa daawo)
Waxaad ka arki kartaa shabakad kasta oo bixisa Caafimaadka Maskaxda qiimeyntaada hore.
Dhagsii badhanka Raadinta.
Xulo inta aad doonayso inaad u safarto daryeel ahaan.
Khadadka caawinta dhibaatooyinka ayaa kuu diyaarin kara waqtiga aad u baahan tahay. Haddii aad ku sugan tahay dhibaato ama aad la dhibtooneyso caafimaadkaaga maskaxda, khadka caawimaad ee dhibaatada ayaa ku siinaysa taageero bilaash ah oo sir ah Ka raadso khadka caawinta dhibaatada ee degmadaada.
Haddii aad la kulanto xaalad caafimaad oo deg-deg ah ama aad khatar ku sugan tahay, fadlan la xiriir 9-1-1 ama lambarka deg-degga ah ee deegaankaaga.